Umklami Fihla Indawo Yokubhukuda @ Callaway Gardens/Ubhavu wamanzi ashisayo - I-Airbnb
Umklami Fihla Indawo Yokubhukuda @ Callaway Gardens/Ubhavu wamanzi ashisayo
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Jackie
Nethezeka futhi uphefumule ujule e-Villa yethu yokulala engu-2 ebukekayo, eqanjwe ngothando ngokuthi iMagnolia Meadow House. Ifakwe ngaphakathi kweCallaway Gardens wonder and charm. Yenza izinkumbulo ezingapheli ngezinsiza zikanokusho ezinechibi lempophoma nobhavu oshisayo oneziko elinamatshe elingaphandle kanye nendawo yekhishi engaphandle. Ngaphakathi kwendlwana yethu, kuthokomele kufika kuzindawo zomlilo ezi-2 noma indawo yokuphumula kwenye yamadekhi ama-4. Jabulela yonke ifenisha entsha kuwo wonke amagumbi anokhaphethi omusha & nekhishi elivuselelwe ngokuphelele futhi elifenisha ngokuphelele, izinto ezisetshenziswayo ezintsha newasha/isomisi. Imali yenja
“Namuhla, iPine Mountain isebenza njengesango eliya e-Callaway Resort & Gardens engu-14,000-acre. Izivakashi nazo zingajabulela i-State Park enkulu kunazo zonke yase-Georgia, F.D. I-Roosevelt State Park, i-Pine Mountain Antiques Mall, i-Wild Animal Safari, izindawo eziningi zokungcebeleka, izitolo ezisenkabeni yedolobha iPine Mountain, i-Little White House kaFranklin Roosevelt e-Warm Springs eseduze, noma hlela uhambo losuku oluya ezindaweni eziseduze - ukukhetha kungokwakho. !" - exploregeorgia.org
I-Calaway Gardens inokuhlangenwe nakho okuningi kakhulu ongakujabulela UNYAKA WONKE! Uzofuna ukujabulela imisebenzi yasogwini neyamanzi ngesikhathi sentwasahlobo/ehlobo ngombukiso webhaluni lomoya oshisayo, imiqhudelwano ye-water ski, umbukiso we-symphony esihlabathini nokunye okuningi!
I-National Geographic ibonise izingadi zethu ze-Azalea kanye namamayela angu-1,400 wezindlela zamabhayisikili. Kukhona umbukiso wezinyoni ezidla inyama ozokugcina onqenqemeni lwesihlalo sakho futhi ikuthumele ekhaya nezithombe ezinhle kakhulu.
Futhi-ke phakathi nenkathi yeholide awukwazi ukuphuthelwa yiphupho ekukhanyeni ukushayela ngokusebenzisa isipiliyoni ngezitolo ezihlotshisiwe zaseNorth Pole, iziphuzo kanye nokudla.
Kunamahlebezi edili elikhulu lokuwa kanye nokushwiba eqhweni ngesikhathi samaholidi ka-2021. U-Covid uzixazulule lezi zinhlelo zika-2020 kodwa wafinyelela iminwe mayelana nezinkathi ezizayo.
Zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi sijabule kakhulu ukwabelana nawe nge-Callaway Cottage yomndeni ebukekayo futhi silapha ukuze sikusize wenze ukuhlala kwakho kube yinkumbulo ekhethekile kuwe, unyaka nonyaka!